नेपालमै समुद्रबाट होइन, सानो पोखरीबाटै यसरी मोती उत्पादन गर्दै कमला हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – Ap Nepal
नेपालमै समुद्रबाट होइन, सानो पोखरीबाटै यसरी मोती उत्पादन गर्दै कमला हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
समुद्रबाट होइन, सानो पोखरीबाटै मोती उत्पादन गर्दै कमला हेर्नुहोस् हुन्छ यसरी । समुद्री कीरा बाट बन्ने मोती तपाईं हामी सबैले देखेका छौँ । अझ सिनेमाहरूमा समुद्रको किनारामा फक्रिएको फूलजस्तो आकृतिको खबटा भित्र रहेको मोतीलाई निकै आकर्षक रूपमा देखाइएको हुन्छ । तर, समुद्रको गहनाको रूपमा परिचित मोती नेपाली माटोमा पनि पाइन्छ भन्ने के तपाईंलाई थाहा छ ?
समुद्री जीवबाट उत्पादन हुने हुँदा नेपालमा मोतीलाई आयातीत रत्नको रूपमा लिने गरिन्छ । तर, मोरङको सुन्दर हरैँचाकी कमला राईले विगत तीन वर्षदेखि मोती समुद्रमा मात्र पाइन्छ भन्ने भ्रमलाई चिरिदिएकी छन्। उनले समुद्रलाई कुनै छेउले नछुएको नेपालमा नै मोती उत्पादन गर्न थालेकी छन् । नेपालमै मोतीको सम्भावना देखेर उत्पादनमा लागिपरेकी कमला अहिले व्यावसायिक रूपमा फड्को मार्दै छन् ।
सुन्दर हरैँचामा रहेको आफ्नो पुर्ख्यौली घरमा रहेको उनको श्री महाकाली पर्ल फार्मिङ एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर त्यसैको उपज हो । जहाँ हरेक दिन मोती हेर्न उत्सुक भई आउनेहरूलाई नेपालमा मोतीको सम्भावाना रहेको देखाउने गरेकी छिन् । फार्ममा आउने जोकोहीले सुरुमा प्रश्नसहितको नजरले हेरे पनि फर्किंदा भने नयाँ उत्साह र केही गर्ने योजनासहित फर्किने गरेको कमला बताउँ छिन् । उनी भन्छिन्, ‘हरेक दिनजसो सिपीबाट मोती उत्पादन हुन्छ र ? भन्दै आउनुहुन्छ ।
कति त बाहिरैबाट हाँसेर हिड्न खोज्नुहुन्छ तर भित्र पसेर फार्म हेरिसकेपछि उहाँहरूमा छुट्टै उत्साह आएको महसुस गर्छु । मोतीकाे उत्पादन नेपालमै सम्भव छ । र, मात्र ३ हजार रुपैयाँ भए मोतीको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण कमला स्वयम् हुन् । उनी तालिम लिएर सजिलै व्यवसाय सुरु गर्न आग्रह गर्छिन् । तीन वर्षको समयावधिमा उनले झण्डै ४ हजारभन्दा धेरै मोती उत्पादन गर्ने सिपीलाई आफ्नो पोखरीमा हुर्काइरहेकी छन् । योसँगै सफल रूपमा मोती पनि उत्पादन गर्दै आएकी छन् । शिलापत्रमा खबरमा छ ।
बाँकी तलको भिडियो हेरौं…
Prevधुर्मुस-सुन्तलीको अभिनयमा जिग्रीको स्वरमा नयाँ गीत ‘मायाले जीवन सजाउ’ सार्वजनिक-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
Nextको हुन् जेनिस उप्रेती जो “दि भ्वाइस अफ किड्स”को उपाधि बिजेता ?
धरहराको उद्घाटनको दिन धरहरा चढ्न सयौंको संख्यामा सर्वसाधारण गेट उछि नेर भित्र पसे (भि; डियो सहित)